जोर्डन मा लुगा कसरी | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | सुझावहरू, जोर्डन
तपाईंले निर्णय गर्नुभयो जोर्डनको लागि यात्रा जब स्वास्थ्य अवस्था सामान्यमा फर्कन्छ। तपाईं पर्यटन गन्तव्यहरू, खाना, भिसा, यातायात र अधिकको बारेमा पढ्नुहुन्छ तर तपाईंले बुझ्नुहुन्छ कि सबैले कुरा गर्छन् महिलाले कसरी लुगा लगाउनु पर्छ त्यो देशमा र त्यसपछि तपाईंले बुझ्नुभयो कि तपाईं त्यो महिला हुनुहुन्छ।
एक मा एक महिला इस्लामिक देश यो सजिलो छैन। धेरै जसो विश्वका अन्य भागहरूमा महिला यात्रुहरूले स्वतन्त्रता र हेरचाहको साथ आफैलाई सम्हाल्छन्, यहाँ परिस्थितिमा पेचको अर्को मोड छ किनकि यो एकदम धार्मिक देश हो। त्यसोभए आज हेरौं कसरी जोर्डनमा लुगा लगाउने।
जोर्डन र यसको संस्कृति
जोर्डन ऐतिहासिक खजानाहरू भएको देश हो त्यसैले धेरै यात्रुहरूलाई यो रोचक लाग्दछ। छ दुई अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टहरू, एउटा अम्मानमा, राष्ट्रिय राजधानी, अर्को लाल समुद्रको किनारमा, अकाबामा, ताकि तपाईं कहाँ प्रवेश गर्न वा एउटा भित्र पस्न, देश पार गर्न, र अर्को पारबाट बाहिर निस्कन सक्नुहुन्छ।
यदि तपाइँको छनोट राजधानीको साथ सुरु गर्ने हो भने, किनकि यसले राम्रो र महत्त्वपूर्ण संग्रहालयहरू र महत्त्वपूर्ण साइटहरूलाई केन्द्रित गर्दछ। तपाईं शहरको यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ र दिनको यात्राहरू अनुसूचित गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरण को लागी, अम्मानबाट तपाईं को भग्नावशेषमा जान सक्नुहुन्छ सारियोthe र XNUMXth औं शताब्दीका मोज़ाइकको साथ मध्य पूर्वको सब भन्दा पुरानो शहरहरू मध्ये एक। तपाइँ तपाइँको यात्रा जारी राख्न सक्नुहुन्छ माबो नेबो ऐतिहासिक र बाइबलीय चिन्तन गर्न जोर्डन उपत्यका र अन्त्यमा मृत समुद्र एक दुर्लभ, फ्लोटिंग डुबकी लिन।
यो देशको उत्तरी भाग, जहाँ अम्मान अवस्थित छ, धेरै धनी र उर्वर भूमि र इस्लामिक खजाना छ Ajlon महल वा को शहर गेरासा। यो सबै हेरेपछि, तपाईं दक्षिणतिर, मरूभूमिमा जान सक्नुहुन्छ वाडी मुजीबको सुख्खा उपत्यका, केरक र यसको क्रुजाडोसको महल, पेट्रा र यसको घाटी जहाँ तपाईं ऊँट चढ्न सक्नुहुन्छ, पहाडहरू, मरुभूमिबाट हिंड्न वाडी रम × × je जीपमा, द्वारा चन्द्रमाको घाटी अकाबा र यसको पानीमुनि सुन्दरहरूमा पुग्न नसकेसम्म बेडौइन संस्कृति पत्ता लगाउँदै। के तपाईं डुबुल्की मार्ने आँट गर्नुहुन्छ?
तर सत्य यो हो कि जब तपाईं यो सबै गर्नुहुन्छ, र यदि तपाईं एक महिला हुनुहुन्छ भने, तपाईं ड्रेसिंग गर्दा सावधान हुनुपर्छ। जोर्डन एक हो धेरै परम्परावादी देश त्यसैले आदर्श माध्यम बाट जान्छ वक्र र कपाल कभर गर्नुहोस् यदि तपाईं केटी हुनुहुन्छ भने। यो सब भन्दा परम्परावादी अन्त मा अवस्थित छैन, तपाईं जीन्स वा खेल को जुत्ता मा केटीहरु देख्नुहुन्छ तर धेरै छैन। त्यसैले सबै भन्दा राम्रो छ ध्यान आकर्षित गर्दैन र शॉर्ट्स, मांसपेशि वा छोटो पोशाकहरू प्याक नगर्नुहोस्। केहि पनि छैन जसले धेरै छाला देखाउँदछ।
तपाईंले आफुलाई पुरानो बत्तीजस्तै कभर गर्नुपर्दैन, केही लिनुहोस् तपाईंको टाउको कभर गर्न ठूलो स्कार्फजे भए पनि तपाई पश्‍चिमी हुनुहुन्छ र तपाईबाट अपेक्षा गरिएको छैन तर सम्मान जब यो कपालमा आउँदछ, तपाईं शहरहरूमा क्यार्चिफलाई छोड्न पनि सक्नुहुन्छ, तर त्यो याद गर्नुहोस् भिजेको कपालको साथ होटल वा होस्टल नछोड्नुहोस्कृपया यसलाई राम्रोसँग सुकाउनुहोस् किनभने भिजेको कपाललाई यौन मानिन्छ।
सामान्य रूपमा कपडाको लागि, कसैलाई हल्का लुगा लगाउन लोभ हुन्छ र यसको फाइदा लिन्छ र केही सूर्य लिन वा कूलर बाहिर जान्छ। यहाँ त्यस्तो मामला छैन, कम्तिमा यदि तपाईं शहरहरू, संग्रहालयहरू वा ऐतिहासिक स्थानहरूमा जानुहुन्छ भने। एक रिसोर्ट भित्र तपाईं सर्टमा हिंड्न सक्नुहुन्छ, तर यदि तपाईं ग्रामीण इलाका, अम्मानको वरिपरि घुम्नुहुन्छ भने, तपाईं आरामदायक हुन असमान हुन चाहनुहुन्न।
मुस्लिम देशहरूमा एक महिलाले विचार गर्नुपर्ने दुई शब्दहरू छन्: संस्कृति र विवेकको सम्मान। तपाईं जहाँ जानुहुन्छ, जे देख्नुहुन्छ त्यही गर्नुहोस्, भनाइ भन्छ, र यहाँ यो एकदम लागू हुन्छ। तपाईंले जान्नुपर्दछ कि संसार एकै छैन, बिभिन्न संस्कृतिहरू छन् र ती पनि साझा नगरीकन हामीले उनीहरूलाई आदर गर्नै पर्छ। अर्को कुरा विवेक हो। ध्यान आकर्षित नगर्नुहोस्। तपाईं पुरुषबाट अश्लील देखिनुको केन्द्र बन्न चाहनुहुन्न र महिलाबाट निन्दाको निन्दा गर्दै हुनुहुन्छ।
यदि तपाईं कोर्सको बीचमा जान चाहानुहुन्छ भने तपाईं सँग जान सक्नुहुन्छ पौंडी पोशाक। त्यहाँ मृत सागर क्षेत्रमा धेरै रिसोर्टहरू छन् र तपाईं केही चीज देख्नुहुनेछ, बुर्किनी सूट, जम्पसुट्स, बिकिनी सम्मका महिलाहरूबाट। हिंड्नु वा समुद्रमा हुनु वा सनबेट गर्नु सबै राम्रो छ, तर तपाईं सडकमा वा यस प्रकारको पोशाकमा होटल भएर हिंड्नुपर्दैन। म जिद्दी गर्दछु, तपाईलाई यस्तो परिस्थिति मनपर्दैन जब तपाई आँखा झिम्काउनु हुनेछ।
र जुत्ताको बारेमा के हुन्छ? सहरी क्षेत्रहरूको लागि चप्पल वा हल्का जुत्ता तिनीहरू धेरै राम्रो छन् तर यदि तपाईं मरुभूमि वा पेट्रामा जानुहुन्छ तपाईं लिन सक्नुहुनेछ ट्रेकिंग जुत्ता वा अधिक grippy एकमात्र संग केहि। सहरी र ग्रामीण क्षेत्रको कुरा गर्दा, तपाईं आफ्नो सुटकेस वा ब्याकप्याक यी दुई क्षेत्रहरू र उनीहरूसँग सम्बन्धित कपडाहरूको बारेमा सोच्न भेला गर्न सक्नुहुन्छ: शहरहरूको लागि, लुगा सिल्क प्यान्ट, फराकिलो टी-शर्ट, छालाको जुत्ता, केही तौल सहित, मध्यम सामानको झोला तपाईले किनेका सामानहरू राख्न। , र ग्रामीण क्षेत्रहरु को लागी तपाई जुत्ता परिवर्तन गर्नुहोस् र टोपी थप गर्नुहोस्।
जोर्डनमा कसरी लुगा लगाउने भन्ने बारेमा आजको लेख समाप्त गर्दै यदि तपाईं एक महिला हुनुहुन्छ भने तपाईंले आरयाद गर्नुहोस् शरीरका यी भागहरू ढाक्न: छाती, काँधहरू, पेट र खुट्टाहरू। यदि तपाईं मस्जिद वा धार्मिक साइटहरूमा प्रवेश गर्नुहुन्छ भने लामो बाहुलाहरू महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ, तर अन्य ठाउँमा काँध छोप्ने पर्याप्त छ। जॉर्डनका महिलाहरूले हिजाब वा बुर्का अन्तर्गत कपालले आफ्नो कपाल ढाक्दछन्, तर तपाईं पर्यटक हुनुहुन्छ र उही मांग तपाईंमा आउँदैन। धार्मिक ठाउँहरूमा तिनीहरूले सामान्यतया तपाईंलाई यो केहि गर्न प्रस्ताव गर्छन्, यदि तपाईंसँग छैन भने।
जोर्डन इजिप्ट भन्दा धेरै आधुनिक छ जब यो कपडाको कुरा आउँछ, तर यो विचार गर्नुहोस् कि यदि तपाईं संगठित भ्रमणमा जानुभयो भने यो एक्लो छ तर तपाईं एक्लै जाने निर्णय गर्नु भन्दा यो सजिलो हुन्छ। के तपाईंले बिर्सनु हुँदैन, अतिरिक्तको रूपमा, सनस्क्रीन, सनग्लास, आरामदायी टोपी, सूर्यपश्चात मरहम र विकर्षक हो। र निस्सन्देह, एक राम्रो समय चाहानुहुन्छ तर त्यो, यो महामारी पछि जुन हामी सबैले घरमा बाँध्यौं, यो आश्वासन भन्दा बढी हो। र तीन प्रतितमा!
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » सुझावहरू » जोर्डनमा कसरी लुगा लगाउने